SME | Event Category
TECHNOLOGIES AND MARKET PROMOTION FUNCTION
Agri Innovation Fund(AIF) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲ
Agri Innovation Fund(AIF) စီမံကိန်းဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း #GIZ Myanmar သည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများအသင်းတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွင်း အရည်အသွေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီသည့် စျေးကွက်ဝင် ထုတ်ကုန်များဖြစ်လာစေရန်အတွက် အားပေးမြှင့်တင်ရန် Agri- Innovation Fund (AIF) အစီအစဉ်အား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ #အဆိုပါ AIF စီမံကိန်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို မျှဝေပေးနိုင်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအား လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို မျှဝေပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်- #နေ့ရက် - ၂၂.၁.၂၀၂၁ (သောကြာနေ့) #အချိန် - နေ့လယ် (၁၄:၀၀) နာရီမှ (၁၆:၃၀) နာရီအထိ #နေရာ - Online (Microsoft Team Application) #သို့ဖြစ်ပါ၍ ကော်ဖီ၊ ငရုတ်၊ ချင်း၊ ကျွဲကောသီးနှင့် မှို စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ် ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ Value Chains တစ်လျှောက်ရှိ စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်− #ဒေါ်မေပွင့်ဖြူ − e-mail-may.phyu@giz.de ဖုန်းနံပါတ်− 09-262 070 205 #ဦးကောင်းခန့်ဆွေ e-mail- kaung.swe@giz.de ဖုန်းနံပါတ် − 09-254 360 784
Good Manufacturing Practice (GMP) for MSME သင်တန်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
Good Manufacturing Practice (GMP) for MSME သင်တန်းဖိတ်ကြားခြင်း???????????? ============================================== ????????မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၏ Food Safety Project အရ Good Manufacturing Practice (GMP) for MSME သင်တန်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်????(၁၇.၉.၂၀၁၉) (အင်္ဂါနေ့) ကျင်းပမည့် အချိန်⏰နံနက် (၉း၃၀)နာရီ မှ ညနေ (၄း၃၀)နာရီထိ ကျင်းပမည့်နေရာ????မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစက်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊အမှတ်(၂၉)၊ ကွင်းအမှတ်(၉၀၂)၊ သီတာအေးရပ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ချမ်းမြေ့သာစည်တောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ သင်တန်းသားဦးရေ - (၄၀)ဦး သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသော MSMEs လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ????????(၁၅.၉.၂၀၁၉)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား အောက်ပါဖုန်းနံပတ်သို့ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ☎️ဖုန်း - ၀၂-၄၀၃၉၅၇၃၊ (ရုံးချိန်အတွင်းသာ)
စျေးကွက်ဝင် စပျစ်သီးနှင့်စပျစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာထောက်ပံ့မှု
From 26-10-2016 to 4-11-2016
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် PUM Netherlands Senior Expertsအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ စပျစ်သီးနှင့်စပျစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင် များအား စျေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် စပျစ်သီးနှင့်စပျစ်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးသော စာတွေ့/လက်တွေ့သင်တန်းများကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့၌ (၂၆.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၃၀.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ လည်းကောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ (၃၁.၁၀.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၄.၁၁.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ထိလည်းကောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း(၁၇၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် စပျစ်မျိုးကွဲများအကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေရွေးချယ်မှုလိုအပ်သည့် ရာသီဥတု၊ Organic Fertilizer ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရေး၊ ဝိုင် အမျိုးအစား၊ ဝိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းစဉ်၊ ဝိုင်တွင်ပါဝင်ရမည့်သကြားနှင့် Alcohol ပါဝင်နှုန်းစသည်တို့ကို သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ ၄င်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုအရ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စပျစ်ပင်စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးသည့် နည်းပညာများ၊ Organic Fertilizer ပြုလုပ်ခြင်း၊ စပျစ်သီးအရသာချိုကဲရန် လိုအပ်သော မြေဆီလွှာ၏PH Level ၊ ပိုးမွှားကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ၊ ဝိုင် ဖောက်ခြင်း Processများ၊ အနံ့ထိန်းသိမ်းမှုနည်းစနစ်များ၊ အရောင်ကြည်လင်ရန် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်း များကို ပိုမိုသိရှိလာကြပြီးစျေးကွက်ဝင်စပျစ်နှင့်စပျစ်ဝိုင် ထုတ်လုပ်လာနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Quality Product များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးသည့် စာတွေ့/ လက်တွေ့ သင်တန်း
From 26-04-2016 to 30-04-2016
မန္တလေးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုးကုတ် မြို့
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် PUM Netherlands Senior Expertsအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စျေးကွက်ဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် Quality Product များထုတ်လုပ်နိုင်ရန် နည်းပညာပံ့ပိုးပေးသည့် စာတွေ့/ လက်တွေ့ သင်တန်းကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် (၂၆.၄.၂၀၁၆) ရက်နေ့၌ လည်း ကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မိုးကုတ် မြို့၌ (၂၇.၄.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၃၀.၄.၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိလည်း ကောင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ စုစု ပေါင်း လုပ်ငန်းရှင် (၇၄) ဦးအား နည်းပညာ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာပေးသင်တန်းတွင် ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်များအား မြေဆီလွှာ ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်း၊ ကော်ဖီပင်အတွက်မြေဆီလွှာအမျိုးအစား၊ အရိပ်ပင်အကြောင်း၊ အရိပ်ပင်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ စိုက်ပျိုးမြေ ၏ချဉ်/ငံကိန်း(PH)(Concentr- ation of H+iron) မျိုးစေ့ယူခြင်းနှင့် ပျိုးထောင်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အသီး(Coffee cherry) ခူးယူခြင်းနှင့်ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ကော်ဖီစေ့များအား အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကို စာတွေ့၊လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါနည်းပညာရယူခဲ့သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တန်ဖိုးမြှင့်ကော်ဖီစေ့ ထုတ်လုပ်သည့် နည်းပညာရရှိခြင်း၊ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်၏စျေးကွက်တစ်ခုကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်မည့် အခွင့်အရေးရရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း နည်းပညာအမြင်များ ဖလှယ်နိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါသည်။
စျေးကွက်ဝင်ကော်ဖီ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပို့ချမှုအပေါ် လက်တွေ့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု နှင့်ပြန်လည် ဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခြင်း
From 17-02-2017 to 20-02-2017
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စျေးကွက်ဝင်ကော်ဖီ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ပညာရှင်မှ စာတွေ့လက်တွေ့နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးမှု များအား အသုံးချမှုအပေါ်အကျိုးထိရောက်မှုရှိ/ မရှိကို လက်တွေ့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပြန်လည် ဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် (၁၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၀.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့၊ Arrow Brother Co., Ltd. ၏ ကော်ဖီစိုက်ခင်းတွင် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ။အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် Arrow Brother Co., Ltd. မှ PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့အစည်း ၏ပညာရှင်အကြံပေးချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် တတိယအကြိမ် Organic Coffee Cupping Quality Competition ပြိုင်ပွဲတွင် Score 87.18 ဖြင့် အကောင်းဆုံး အနံ့အရသာနှင့်ပြည့်စုံသည့် ပထမဆုကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
Mango Value Added Workshop
From 26-06-2017 to 30-06-2017
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန နှင့်ပူးပေါင်း၍ သရက်သီးမှ တန်ဘိုးမြင့် ထုတ်ကုန် များထုတ်လုပ်လာနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ “Mango Value Added Workshop” နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးခြင်းကို (၂၆.၆.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၃၀.၆.၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း (၂၆) ဦးအား နည်းပညာများပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နည်းပညာသင်တန်း၌ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီး ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်းနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသဇင်ဟန် တို့မှ သရက်သီးမှ သရက်သီးခြောက်၊ သရက်သီးCandy ၊ သရက်ယို စသည့် တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်နည်းပညာများ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ရရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဒေသထွက်ကုန်များကို Value-Added ပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြှင့်ကာ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းများ ရရှိခဲ့ပါသည်။
Foundry & Forging နည်းပညာ ထောက်ပံ့မှုသင်တန်း
From 20-02-2016 to 8-03-2016
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီ နိုင်ငံ Friedrich Naumann Foundation (FNF) အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ Foundry &amp; Forging နည်းပညာ ဆိုင်ရာနည်းပညာများအား စက်မှုဇုန်မှ လုပ်ငန်းရှင်များ ပိုမိုနားလည် သိရှိစေရေးအတွက် ပြည်တွင်းပညာ Foundry &amp; Forging နည်းပညာ ထောက်ပံ့မှု သင်တန်း များကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီရုံးတွင် (၂၀.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၂၃.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ လုပ်ငန်း ရှင်(၄၅)ဦး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးတွင် (၂၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၂၈.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ထိ လုပ်ငန်းရှင် (၆၇) ဦး၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်(၇.၃. ၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၈.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ လုပ်ငန်းရှင် (၅၂) ဦး အသီးသီး နည်းပညာများရယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Foundry &amp; Forging နည်းပညာသင်တန်းတွင် Type of Cast Iron, Unique Propertiesof Cast Iron, Wear Resistant of Cast Iron, Carbon Raisers &amp; Cast Iron, Heat Resistance Steel, Steel Casting, Occupational Safety and Health Administ- ration in Foundry ဘာသာရပ် များကို ပြည်တွင်းပညာရှင်များမှ သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ သံရည်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်းနည်းပညာသစ်များ ကို SME လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပြန်လည်ပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်လာသဖြင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေး ပြည့်မီလာခြင်း၊ သံထည်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည့် Carbon Percentage, Silicon Percentage များကို သိရှိတိုင်းတာ လာနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူး များကိုရရှိလာခဲ့ပါသည်။
စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးပေးသည့် စာတွေ့/ လက်တွေ့သင်တန်း
From 4-12-2016 to 17-12-2016
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ပြည်ပစျေးကွက်ဝင် အရည်အသွေးမှီ ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်လာနိုင်စေရန်အတွက် စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးပေးသည့် စာတွေ့/ လက်တွေ့သင်တန်းကို (၄.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၇.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ရာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စဉ့်ထည်လုပ်ငန်းရှင်(၃၀) ဦးအား အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး၊ (၅.၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၁၇.၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ကျောက်မြောင်းမြို့၌ ဟံဝင်းစောစဉ့်ထည်လုပ်ငန်းရှင် (၃) ဦးအား ထပ်မံ၍ နည်းပညာပံ့ပိုးပေးခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ စဉ့်အိုးထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးပေးသည့် သင်တန်းတွင် PUM Netherlands Senior Experts အဖွဲ့အစည်း၏ စဉ့်ထည်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် (၂) ဦးမှ ရွံ့သားများ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ပြုပြင်သည့်နည်းပညာများ၊ ဓါတုပစ္စည်းအမျိုးမျိုး သုံး၍ စဉ့်အရောင်မျိုးစုံ ဖော်သည့်နည်းပညာများ၊ လျှပ်စစ်အိုးထိန်းစက် ပြုလုပ်သည့် နည်းပညာများ၊ လျှပ်စစ်အသုံးပြု စဉ့်ဖိုသုံး၍ စဉ့်ထည်ထုတ်လုပ်နည်းများ၊ Gas Kiln တည်ဆောက်အသုံးပြု နည်းပညာများပို့ချပေးခဲ့ရာ၊ စဉ့်ထည်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက် သွားနိုင်ပြီး အရည်အသွေးများတိုးတက်ကာ Export ထိတင်ဖို့ရောင်းချနိုင်သည့် အကျိုး ကျေးဇူးများစွာ ရရှိပါသည်။
မုန့်ဖတ်ခြောက် ပြုလုပ်သည့်နည်းစနစ်၊ နည်းပညာမျှဝေ ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ
ရန်ကုန်မြို့၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်ရှိ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဌာနနှင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ အစားအစာ ထုတ်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းလျက် မုန့်ဖတ်ခြောက် ပြုလုပ်သည့်နည်းစနစ်၊ နည်းပညာမျှဝေ ဆွေးနွေး ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို (၂၂.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ရှိ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်း များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ၊ အစားအစာထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူ လုပ်ငန်းရှင် (၃၃) ဦး အား မုန့်ဖတ်ခြောက် ပြုလုပ်သည့်နည်းပညာများမျှဝေ ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု ဦးစီး ဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဖြူဖြူဝင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်သောင်းဦး၊ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) အဖွဲ့အစည်း၏ Food Advisor ဦးတင်နိုင်ဝင်းတို့မှ Starch တွင်ပါရှိသည့် အစေးဓာတ် နှစ်မျိုးအကြောင်း၊ မုန့်ကြိတ်စဉ် ရေထည့်ရမည့်အချိုးအစားများအကြောင်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အခြေခံလိုအပ်ချက်များအကြောင်း၊ မြန်မာ့မုန့်ဖတ်အမျိုးအစားများကို အရွယ်အစားခွဲခြားမှု၊ ပြုလုပ်သည့်နည်းပညာနှင့် သုံးစွဲမှုများကြောင်း၊ မုန့်ဖတ်အခြောက်ခံသည့်နည်းစနစ်၊ ဖြူဖွေး သောမုန့်ဖတ်ပြုလုပ်သည့် နည်းပညာနှင့် စက်ပစ္စည်းအကြောင်းများအား Presentation ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Movie ဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဆွေးနွေးပြသခဲ့ကြပြီးနောက်၊ တက်ရောက်လာသည့် လုပ်ငန်းရှင်များမှ မိမိတို့ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများနှင့် သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Copyright © 2021 All Right Reserved. Contents provided and maintained by Department of Small and Medium Enterprises Development